Farsamooyinka lagu Kobcinayo Barashada: Kuwee Run ahaantii Wax -ku -ool ah? Qeybta 2aad | Tababarka Garashada
Sida cinwaanka maqaalku tilmaamayo, waxaan mar horeba u hurnay mawduucan, labadaba ka hadal farsamooyin wax ku ool ah, labaduba ka hadlaya neuromites iyo farsamooyin aan waxtar lahayn. Waxaan sidoo kale u galnay habaynno si loo fududeeyo waxbarashada iyadoo ay jiraan jirrooyin gaar ah (tusaale ahaan, dyslexia e yaraanshaha xusuusta shaqada).
Si ka sii faahfaahsan, oo tixraacaya mid dib u eegis waxaa qoray Dunlosky iyo asxaabtiisa, waxaan samaynay a liiska 10 farsamo ka gudbaan baadhitaanka sayniska, qaar aad waxtar u leh iyo qaar kale oo aan aad waxtar u lahayn, iyaga oo tilmaamaya xooggooda iyo daciifnimadooda.
Maanta waxaan rabnaa inaan cusbooneysiino khudbadii hore loo bilaabay waana dib u eegi doonaa 6 farsamooyin; qaar ka mid ah kuwan waa lagu celin doonaa marka la barbar dhigo maqaalkii hore, qaar kale ayaan arki doonaa markii ugu horeysay. Dhammaan farsamooyinkan, marka loo eego dib -u -eegista suugaanta aan ku tiirsanaan doonno Weinstein iyo asxaabteena, waxay leeyihiin hal shay: dhammaantood waa wax -ku -ool.
Waa maxay farsamooyinkani?
1) DHAQAN -QAYBINTA
Waa su’aal ah in dib loo dhigo wejiyada daraasadda iyo, wax walba oo ka sarreeya, dib -u -fiirinta halkii lagu uruurin lahaa hal fadhi (ama dhowr fadhi oo dhow). Waxa la arkay ayaa ah, iyada oo isla waqtigaas lagu qaatay dib -u -eegista, dadka fuliya hawlahan kalfadhiyada la kala fogeeyay waqti ka dib ayaa si dhakhso leh wax u bartaan, xogtuna waxay ahaanaysaa mid xasilloon xusuusta.
Tusaalooyinka sida loo adeegsado
Waxaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay in la abuuro munaasabado u heellan dib -u -eegista mowduucyada laga hadlay toddobaadyadii ama bilooyinkii hore. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay u muuqan kartaa mid adag iyadoo ay ugu wacan tahay wakhtiga xaddidan ee jira, oo ay weheliso baahida loo qabo in la daboolo barnaamijka daraasadda oo dhan; si kastaba ha ahaatee, kala fogaanshaha fadhiyada dib -u -eegista waxaa lagu gaari karaa iyada oo aan dhib badan loo geysan macallimiinta haddii macallimiintu ay qaataan daqiiqado yar fasalka si ay u eegaan macluumaadka casharradii hore.
Hab kale ayaa ka koobnaan kara in ardayda loo xilsaaro culeyska ah in ay isu abaabulaan dib -u -eegista loo qaybiyey waqti ka dib. Dabcan, tani waxay ugu fiicnaan doontaa ardayda heerka sare ah (tusaale ahaan, dugsiga sare). Maaddaama kala -fogaanshuhu u baahan yahay qorshe hore, si kastaba ha ahaatee, waa lama huraan in macallinku ka caawiyo ardayda qorshaynta waxbarashadooda. Tusaale ahaan, macallimiintu waxay soo jeedin karaan in ardaydu jadwal u dhigaan fadhiyada waxbarashada maalmaha la beddelayo kuwa maaddo gaar ah lagu baranayo fasalka dhexdiisa (tusaale ahaan, jadwalka dib -u -eegista jadwalka Talaadada iyo Khamiista haddii maadada lagu dhigo dugsiga. Isniinta iyo Arbacada ).
Feejignaanta koowaad waxay ku saabsan tahay jahawareerka suurtagalka ah ee u dhexeeya kala fogaanshaha dib -u -eegista iyo fidinta fudud ee daraasadda; farsamada, dhab ahaantii, waxay inta badan saadaalisaa in wejiyada dib -u -eegista dib loo dhigo waqti ka dib. In kasta oo saamaynta togan hore loogu yaqaanay kala fogaanshaha wejiyada dib -u -eegista, haddana saamaynta daraasadda dib loo dhigay si fiican looma yaqaan.
Feejignaanta labaad ayaa ah in ardayda laga yaabo inaysan ku qanacsanayn hab -dhaqanka loo qaybiyey maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay ka dhib badan tahay dib -u -eegista xoogga la saaray isla marxaladda daraasadda. Aragtidaan, macno gaar ah, waxay u dhigantaa xaqiiqda maadaama, dhinac, dib -u -dhigista dib -u -eegista waqti ka dib waxay dib -u -helidda macluumaadka ka dhigaysaa mid aad u adag iyo, dhinaca kale, ku -dhaqmidda daraasadda degdegga ah sida muuqata way shaqaysaa (way ka dhakhso badan tahay), kor Xaaladaha ay daraasaddu ujeeddadeedu tahay kaliya in imtixaan laga gudbo. Si kastaba ha ahaatee, faa'idada dhaqanka la qaybiyey waa in had iyo jeer la tixgeliyaa meesha ay muhiim tahay in macluumaadka lagu hayo xusuusta muddo dheer.
Dhinacyada weli u baahan in la caddeeyo
Waxaa jira cilmi-baaris la'aan oo darsaysa saamaynta kala-fogeynta barashada macluumaadka kala duwan waqti ka dib, isku dayaya in la fahmo in wixii loo sheegay dib-u-eegista waqtiga-dheer ay sidoo kale run ka yihiin kiiskan.
Ka sokow faa'idada aan shaki ku jirin ee dhaqanka la qaybiyey, waa in la fahmo haddii marxaladda dhaq -dhaqaaqa degdegga ah ay sidoo kale lagama maarmaan tahay ama lagu talin karo.
Marna xitaa lama caddayn waxa u dhexeeya inta ugu habboon inta u dhexaysa wejiyada dib -u -eegista iyo soo -helidda macluumaadka si markaa waxbarashada loo kordhiyo.
2) DHAQANFASHILAN '
Farsamadani waxay ka kooban tahay wax ka qabashada fikradaha kala duwan ama noocyada dhibaatooyinka si isku xigxig ah, oo ka soo horjeeda habka caadiga ah ee wax looga qabanayo noocyada dhibka isla casharka waxbarashada la siiyay. Waxaa marar badan lagu tijaabiyay barashada xisaabta iyo fikradaha fiisigiska.
Waxaa la qiyaasayaa in faa'iidada farsamadan ay ku jirto u oggolaanshaha ardayda inay helaan karti ay ku doortaan habka saxda ah ee lagu xallinayo noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka halkii ay ka baran lahaayeen habka laftiisa oo aysan ahayn goorta la dabaqi lahaa.
Dhab ahaantii, dhaqanka 'dhex -dhexaadinta' ayaa sidoo kale si guul leh loogu dabaqay noocyada kale ee nuxurka barashada, tusaale ahaan, xagga farshaxanka waxay u oggolaatay ardayda inay si fiican u bartaan inay shaqo gaar ah la xiriiriyaan qoraaga saxda ah.
Tusaale sida loo dalbado
Waxaa loo adeegsan karaa siyaabo badan. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa in la isku qaso dhibaatooyinka ku lugta leh xisaabinta mugga adkaha kala duwan (halkii la samayn lahaa jimicsiyo badan oo isku xiga oo leh nooc adag).
Cilmi -baaristu waxay diiradda saartay isku -beddelka laylisyada isku xiran, sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in laga digtoonaado in aan la isku darin waxyaabaha aad ugu kala duwan midba midka kale (daraasado arrintan ku saabsan ayaa maqan). Maadaama ay u fududahay ardayda yaryari inay isku qaldaan noocaan oo kale ah oo aan loo baahnayn (oo laga yaabo in aan wax -soo -saar lahayn) isku -beddel waxtar leh oo macluumaad isku xiran, waxaa laga yaabaa inay u roon tahay macallimiinta ardayda yar -yar inay abuuraan fursado 'waxqabad dhex -dhexaad ah'. su'aalaha.
Dib ugu noqoshada mowduucyadii hore si isdaba joog ah inta lagu jiro simistarka ma joojisaa barashada macluumaadka cusub? Sidee bay xogtii hore iyo tan cusub isu beddeli karaan? Sidee loo go'aamiyaa dheelitirka u dhexeeya macluumaadka hore iyo kan cusub?
3) WAXQABADKA SOO CELINTA / QIIMEYNTA
Waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu wax ku oolka badan uguna fudud ee lagu dabaqi karo. Si fudud, waa su’aal ah in dib loo xusuusto wixii hore loo soo bartay, labadaba is-hubin iyo hubin rasmi ah. Ficilka aad xusuusta uga soo celiso macluumaadka ayaa kaa caawineysa in la xoojiyo macluumaadka. Dhaqankani wuxuu shaqeeyaa xitaa haddii macluumaadka dib loo soo celiyo iyada oo aan afka laga sheegin. Waxtarka ayaa sidoo kale la tijaabiyay iyada oo la barbardhigay natiijooyinka ardayda kuwaas oo, halkii ay xusuusta ka xasuusan lahaayeen xusuusta, u tageen inay dib u akhriyaan xogtii hore loo bartay (ku dhaqanka ka soo kabashada xusuusta ayaa noqotay mid ka saraysa natiijooyinka!).
Habka ugu fudud ee loo dalbado wuxuu noqon karaa in lagu casumo ardayda inay qoraan wax kasta oo ay xusuustaan ​​oo ku saabsan maado gaar ah oo la bartay.
Hab kale oo fudud ayaa ah in ardayda la siiyo su'aalo imtixaan si ay uga jawaabaan markay wax barteen (ha ahaato mid socota ama dhammaadka marxaladda daraasadda) ama siiya talooyin ay dib ugu soo celiyaan macluumaadka ama ka codsadaan inay ku abuuraan maababka fikradda maadada. macluumaadka ay xasuustaan.
Wax -ku -oolnimada farsamadu sidoo kale waxay ku xidhan tahay ilaa xad guusha marka la isku dayo in macluumaadka laga soo qaado xusuusta iyo, isla markaas, hawsha waa in aanay noqon mid aad u fudud si loo dammaanad qaado guushan. Haddii, tusaale ahaan, ardaygu uu daboolayo macluumaadka isla marka uu akhriyo ka dibna uu ku celiyo, ma aha xusuusta xusuusta muddada-dheer ee waa dayactir fudud oo ku saabsan xusuusta shaqada. Taa bedelkeeda, haddii guulaha ay aad u hooseeyaan waxay u badan tahay inaysan dhaqankani waxtar yeelan doonin.
Sidoo kale, haddii aad leedahay khariidado fikradeed oo la abuuray si loo xasiliyo xusuusta, waxaa muhiim ah in tan lagu sameeyo qalbiga maxaa yeelay abuurista khariidadaha iyadoo la fiirinayo agabka wax -barasho ayaa muujisay inay aad uga waxtar yar tahay xoojinta macluumaadka.
Ugu dambayn, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo welwelka ay sababi karto isticmaalka imtixaannadu; waxaa dhab ahaan la iftiimiyay in welwelku awood u leeyahay inuu yareeyo faa'iidooyinka xusuusta ee farsamadan (awood uma laha inuu gabi ahaanba baabi'iyo qodobka walaaca, tanaasul wanaagsan wuxuu noqon karaa in la waydiiyo su'aalaha ay u badan tahay inuu ardaygu ka jawaabo).
Wali waa la kala caddaynayaa waa maxay heerka ugu habboon ee dhibka su'aalaha imtixaanka.
4) HABEENKA (SU'AALO HORMARIN)
Farsamadani waxay ka kooban tahay isku xirka macluumaadka cusub iyo aqoontii hore u jirtay. Waxaa jira tafsiirro dhowr ah oo ku saabsan shaqadiisa; mararka qaarkood waxaan ka hadalnaa waxbarasho qoto dheer, waqtiyo kale oo dib -u -habeynta macluumaadka xusuusta.
Marka la soo koobo, waxay ka kooban tahay la -macaamilka ardayga iyadoo la weydiinayo su'aalo ku saabsan mowduucyada la bartay, iyada oo ujeedadu tahay in lagu hoggaamiyo inuu sharraxo isku -xirnaanta macquulka ah ee u dhexeeya macluumaadka la bartay.
Waxaas oo dhan, marka lagu daro u hiilinta xifdinta fikradaha, waxay ku lug leedahay kororka kartida fidinta wixii laga bartay xaaladaha kale.
Habka ugu horreeya ee arjiga ayaa noqon kara si fudud in lagu casuumo ardayga si uu u qotomiyo koodhka macluumaadka la daraaseeyay isaga oo weydiinaya su'aalo sida "sidee?" ama sabab? "
Suurtagalnimada kale ayaa ah inay ardaydu farsamadan adeegsadaan, tusaale ahaan, si fudud iyagoo cod dheer ku sheegaya tallaabooyinka ay u baahan yihiin inay qaadaan si ay u xalliyaan isla'egta.
Marka la isticmaalayo farsamadan waxaa muhiim ah in ardaydu ku hubiyaan jawaabahooda qalabkooda ama macallinka; marka nuxurka ka soo baxay weydiinta ka baaraandegidda uu liito, tani dhab ahaantii way ka sii dari kartaa barashada.
Waxay faa'iido u yeelan doontaa cilmi -baarayaashu inay tijaabiyaan suurtagalnimada adeegsiga farsamadan mar hore marxaladaha hore ee akhrinta fikradaha la barto.
Wali waa la arki doonaa haddii ardaydu ka faa'iideystaan ​​su'aalaha iyagu iskood u abuuray ama inay u wanaagsan tahay in su'aalaha daba-galka ah uu qof kale weydiiyo (tusaale, macallinka).
Waxa kale oo aan caddayn inta ardaygu ku adkaysanayo raadinta jawaab ama waxa heerka saxda ah ee xirfadaha iyo aqoonta la helay ay tahay in uu awood u yeesho ka faa’iidaysiga farsamadan.
Shakiga kama dambaysta ahi wuxuu khuseeyaa wax -ku -oolnimada: maaraynta farsamadan waxay u baahan tahay kordhinta wakhtiyada waxbarashada; ma ku filan tahay faa'idada ama ma ku habboon tahay in lagu tiirsanaado farsamooyin kale, tusaale ahaan, ku -dhaqanka is -hubinta?
5) TUSAALOOYIN DHEERAAD AH
Farsamadani uma baahna isbarasho weyn. Waa su'aal ah in la isku daro tusaalooyin wax ku ool ah iyo sharraxaad aragtiyeed.
Wax -ku -oolnimadu ma aha su'aal waxayna ku salaysan tahay xaqiiqda ah in fikradaha aan la taaban karin ay ka adag yihiin kuwa la taaban karo.
Ma jiraan wax badan oo laga fahmi karo farsamadan; la yaab ma leh, qorayaasha dib -u -eegista oo aan ka qaadanayno xogtan u tilmaam farsamadan midda ugu badan ee lagu xusay buugaagta tababarka macallimiinta (tusaale ahaan qiyaastii 25% kiisaska).
Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid waxtar leh in la ogaado in helidda ardaydu si firfircoon u sharxaan waxa ay laba tusaale u eg yihiin, iyo ku dhiirrigelinta inay soo saaraan macluumaadka muhiimka ah ee laftooda ayaa waliba gacan ka geysan kara guud -marinta kan dambe.
Intaas waxaa sii dheer, bixinta tusaalooyin badan oo la mid ah waxay umuuqataa inay kordhineyso faa'iidada farsamadan.
Waxaa la muujiyey in sharraxaadda fikradda iyo tusidda tusaalaha aan habboonayn ay u egtahay inay wax badan ka ogaato tusaalaha la taaban karo (khaldan!) Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in aad loogu fiirsado noocyada tusaalooyinka ee la bixiyo marka la eego macluumaadka aan rabno in la barto; tusaalooyinku waa inay markaa si fiican ula xiriiraan nuxurka muhiimka ah.
Suurtagalnimada tusaale ahaan si sax ah loo adeegsan doono, taas oo ah, in la soo saaro mabda 'guud oo aan la taaban karin, waxay la xiriirtaa heerka maaddada mawduuca ardayga. Ardayda khibrada badan leh waxay u janjeeraan inay u dhaqaaqaan dhinaca fikradaha muhiimka ah si sahal ah, ardayda khibrada yar waxay u janjeeraan inay dusha sare joogaan.
Tirada ugu wanaagsan ee tusaalooyinka ee doorbidaya guud ahaan fikradaha la barto ayaan weli la qeexin.
Sidoo kale ma cadda waxa dheelitirka saxda ahi yahay inta u dhexaysa heerka soo -saaridda iyo heerka isku -koobnaanta ee ay tahay in tusaalahu yeesho (haddii aad la taaban karo, waxaa laga yaabaa inay aad u adag tahay in la fahmo; haddii aad la taaban karo, waxaa laga yaabaa inaysan waxtar ku filan u lahayn gudbinta fikradda aad rabto inaad barato).
6) CODE LABA JAB AH
Imisa jeer ayaan maqalnay “sawir qiimihiisu waa kun eray”? Tani waa mala -awaalka farsamadan lagu saleeyay. Si gaar ah, aragtida laba-koodhku waxay soo jeedinaysaa in bixinta wakiilo badan oo isku xog ah ay wanaajiso barashada iyo xusuusta, iyo in macluumaadka sida ugu sahlan u kiciya wakiilo dheeri ah (iyada oo loo marayo hababka sawirka otomaatiga ah) ay helaan faa iido la mid ah.
Tusaalaha ugu fudud wuxuu noqon karaa in la bixiyo qorshe muuqaal ah macluumaadka la barto (sida matalaadda unugga lagu sharraxay qoraalka). Farsamadan ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa in ardaygu sawiro waxa uu baranayo.
Maaddaama sawirrada si guud loo xusuusto si ka fiican erayada, waxaa muhiim ah in la hubiyo in sawirrada noocaas ah ee la siiyo ardayda ay yihiin kuwo waxtar leh oo khuseeya waxyaabaha laga filayo inay bartaan.
Waa in taxaddar la muujiyaa marka la dooranayo sawirrada oo dhinac socda qoraalka maaddaama faahfaahinta muuqaalka xad -dhaafka ahi ay mararka qaarkood noqon karto mid carqaladeeya oo caqabad ku noqota waxbarashada.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in farsamadan aysan si fiican ula socon aragtida “qaababka wax -barasho” (taas oo beddelkeeda caddeysay inay khalad tahay); ma aha su'aal ah in ardayga loo oggolaado inuu doorto habka waxbarasho ee la doorbiday (tusaale ahaan, muuqaal o afka ah) laakiin in macluumaadka la mariyo kanaallo badan isku mar (tusaale ahaan, muuqaal e afka ah, isku mar).
Wax badan ayaa weli laga fahmayaa hirgelinta codaynta laba -geesoodka ah, waxaana loo baahan yahay cilmi -baaris dheeraad ah si loo caddeeyo sida macallimiintu uga faa'iideysan karaan faa'iidooyinka matalaadaha badan iyo ka sarraynta sawirka.
Deegaanka iskuulka waxaan ku haysannaa fursado badan oo aan ku adeegsan karno farsamooyinka aan hadda soo sheegnay oo aan isku dari karno. Tusaale ahaan, dhaqanka la qaybiyey wuxuu si gaar ah ugu xoog badnaan karaa barashada marka lagu daro ku-dhaqanka is-tijaabinta (soo-qaadista xusuusta). Faa'iidooyinka dheeraadka ah ee dhaqanka la qaybiyey waxaa lagu heli karaa iyada oo si isdaba-joog ah loo tijaabiyo is-tijaabinta, tusaale ahaan, adeegsiga tijaabinta si loo buuxiyo meelaha bannaan ee u dhexeeya nasashada.
Dhaqanka dhex -dhexaadintu sida iska cad waxay ku lug leedahay qaybinta dib -u -eegista (dhaqanka la qaybiyey) haddii ardaydu beddelaan walxo hore iyo kuwo cusub. Tusaalooyinka la taaban karo waxay noqon karaan kuwo hadal iyo muuqaal labadaba ah, sidaas darteedna waxaa sidoo kale la hirgelinayaa koodh labajibaaran. Intaa waxaa dheer, xeeladaha wax-ka-qabadka, tusaalooyin la taaban karo, iyo koodh laba-laab ah ayaa dhammaantood si fiican u shaqeeya marka loo isticmaalo qayb ka-noqoshada dhaqanka (is-tijaabinta).
Si kastaba ha ahaatee, weli lama xaqiijin in faa'iidooyinka isku -darka xeeladahaan waxbarasho ay yihiin wax -ku -kordhin, isku -dhufasho ama, mararka qaarkood, aan is -waafaqsanayn. Sidaa darteed waxaa lama huraan ah in cilmi -baarista mustaqbalka ay si fiican u qeexdo istiraatiijiyad kasta (gaar ahaan muhiim u ah ka shaqaynta iyo koodh labanlaab), tilmaamto hababka ugu wanaagsan ee arjiga loogu adeegsan karo dugsiga, loo caddeeyo xaaladaha soohdinta ee istaraatijiyad kasta oo la dhexgalo is -dhexgalka ka dhexeeya lixda xeeladood ee aan halkan kaga doodnay .
Dunlosky, J., Rawson, KA, Marsh, EJ, Nathan, MJ, & Willingham, DT (2013). Ku hagaajinta barashada ardayda farsamooyinka wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah: Tilmaamaha ballanqaadka leh ee garashada iyo cilmu-nafsiga waxbarashada. Cilmiga cilmu-nafsiga ee Danta Dadweynaha, 14(1), 4-58.
Weinstein, Y., Madan, CR, & Sumeracki, MA (2018). Baridda cilmiga barashada. Cilmi -baarista garashada: mabaadi'da iyo saamaynta, 3(1), 1-17.
waxbarashada, sida loo wanaajiyo waxbarashada, farsamooyinka barashada
Farsamooyinka lagu Kobcinayo Barashada: Kuwee Run ahaantii Wax -ku -ool ah? Qeybta 22021-08-252021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci.jpg200px200px